နားကြပ်ထုတ်လုပ်သူ - Earldom
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ နားကြပ်ထုတ်လုပ်သူ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
Shenzhen Kaisinuo Electronics Co. , Ltd. တွင်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အပြည့်အဝထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။.
Earldom အပြင်ဘက်ကြိုးမဲ့ Bluetooth Speaker Lk1
Speaker Lk1 ။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း5ဆိပ်ကမ်းကို USB Hub 3.0 မြန်မြန်နှုန်း Splitter, Adapter ကိုအာဏာကို PC Laptop ကိုကားအားသွင်းကိရိယာ
1 USB မှတ်-C အ HCB, Adapter ကိုအာဏာကို PC Laptop ကိုကားအားသွင်းကိရိယာ IN 4
Earldom အကောင်းဆုံး Selfie Stick ZP19 စက်ရုံစျေးနှုန်း - EarldomSelfie Stickzp19
【ထူးခြားသောဂိမ်းနားကြပ် RGB Light 】ဂိမ်းနားကြပ်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ် RGB အလင်းရောင်အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ0န်းကျင်အလင်းရောင်အလင်းရောင်ဖြစ်သည်။ မှောင်မိုက်၌ပင်၎င်းသည်အေးမြသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။【 Search Seight Selection Sound 】 Dual 50mm Drivers သည်အင်အားကြီးမားသောအသံများကိုထုတ်ပေးသည်။ Virtual Sunder Sound သည်သင့်အားပိုမိုမြင့်မားသောအသံတိကျသောအဆင့်ကိုပေးစွမ်းသည်။【 360 °ချိန်ဆစ်ချိန်ညှိထားသောမိုက်ခရိုဖုန်း】 Built-in Microphone သည်ဂိမ်းများသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဗွီဒီယိုတွင်အသံချက်တင်စကားဝိုင်းကို outzoplege ကိုအလွယ်တကူနားကြပ်ပေါ်တွင်အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းသည်သင်၏လိုအပ်ချက်တွင်မည်သည့်ထောင့်ကိုမဆိုချိန်ညှိနိုင်သည်။use အသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်】နားကြပ်ကိုရှူရှိုက်ခြင်းပျော့ပျောင်းသောထည်နားကြပ်များနှင့်မှတ်ဉာဏ်ရေမြှုပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အရှည်ရှိသည့် headbands သည်နာကျင်မှုမရှိသော0တ်စုံများနှင့်အလွန်နားထောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေသည်။